लकडाउन खुकुलो बनाउने सरकारका तीन चरण – Gorkhali Voice
लकडाउन खुकुलो बनाउने सरकारका तीन चरण
२०७७, २९ जेष्ठ बिहीबार ०७:११
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका कारण गत चैत्र ११ देखि जारी लकडाउन खुकुलो बनाउने निर्णय भएको छ । कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको प्रस्तावअनुसार मन्त्रिपरिषदको बुधबार राति सम्पन्न बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
सरकारले समितिको प्रस्तावअनुसार तीन चरणमा लकडाउन खुकुलो बनाउने तयारी गरेको छ । अहिलेकै अवस्थामा पनि लकडाउन पूर्णतया अन्त्य हुन कम्तीमा ५१ दिन लाग्नेछ । यसबीच संक्रमणको अवस्था अहिलेभन्दा नराम्रो भयो भने यो तालिका परिवर्तन हुनसक्छ ।
निर्णय अनुसार पहिलो चरण बिहीबारबाट २१ दिन लागू हुनेछ । कोरोना भाइरस संक्रमणको स्थिति हेरेर १५ दिनसम्म दोस्रो चरण र त्यसपछि तेस्रो चरण पनि थप १५ दिन लागू हुनेछ । तीनै चरण पूरा भएपछि मात्र सरकारले कोरोना संक्रमणको स्थिति विश्लेषण गरी सबै सेवा तथा व्यवसाय खुला गर्नेछ ।
३. सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्स बार र सबै प्रकारका मनोरञ्जन स्थान
१०. खेलकुद प्रतियोगता र खेल मैदानमा हुने प्रस्तुति
११. पहिलो चरणमा खुल्ने भनिएका माथि तोकिएका बाहेक अन्य सबै सवारी साधन
१२. बेलुकी ९ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म एम्बुलेन्स, दमकल, शववाहन र ढुवानीबाहेक सबै प्रकारका आवागमन।
३.सिट क्षमताको आधा व्यक्ति रहने गरी सबै प्रकारका सवारी साधन